huawei c8500,c8600 ကို Root လုပ်ကြမယ် - MYSTERY ZILLION
huawei c8500,c8600 ကို Root လုပ်ကြမယ်
soewinkyaw June 2011 edited August 2011 in Android You can’t root with z4root application, you can use (super one click software).This software is best of the software doing root with the HTC and android phone and sony phone. Note . if you use this software ,pause protection your antivirus software. SUPER+ONE+CLICK+1.7 download here.... http://download1038.mediafire.com/7kdxdkxugeng/ieyckafbk04am3p/super+one+click+1.7.rar Tagged:
Navikyaw July 2011 Registered Users bro... I got3trojans in that file... then... can I continue to root?and... ifaperson download it without updated anti-virus, his computer can be infected... just for sharing bro... anyway, thank u for sharing... :) soewinkyaw July 2011 edited July 2011 Registered Users ဒီ software ကို သုံးတဲ အခါ antivirus software ကို ခန ပိတ်ပေးထာရပါတယ်။antivirus software က ဒီ software ကို Trojans အနေနဲ တွေ.ရလိုပါ။ သင် computer ကို မထိခိုက် နိုင်ပါဘူ။ thank you ..... jayc August 2011 Registered Users bae lo tone ya tar lae pls pyaw pa par jayc August 2011 Registered Users 8500 n 8600 firmware ko bae site ka latest version ko free download loat ya tar lae pls..... soewinkyaw August 2011 Registered Users တစ်ချို. keygen, crack file နင်. hacking သဘောဆောင်တဲ . software program တွေကို antivirus program က threats အနေနဲ ယူဆလိုပါ။ soewinkyaw August 2011 Registered Users would you need android firmware go this website http://www.mmdroid.com/ jayc August 2011 Registered Users i upgrade c8600 firmware but is fail in the 2nd state what should i do bro pls...is that fail is my phone or my firmware? n firmware ka 2.3.4 twat p so... i wanna get itbro pls... thxapout August 2011 Registered Users Android Device များတွင် Root လုပ်ခြင်းက ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရတယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် z4root application နဲ့ Huawei C8500 မှာ root လုပ်ထားပါတယ်။ ဘာတွေအတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတာသိချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ tayzarwinn August 2011 Registered Users huawei c8500s ကိုroot လုပ်ချင်လို့ပါ။ ကူညီပါအုန် Navikyaw September 2011 Registered Users Thank u Bro Soe Win Kyaw... sorry for my late reply... :) htoohtoo27 September 2011 Registered Users c8500 ကော 8600 ပါ super one click နဲ့ root လုပ်လို့ရပါတယ်။ http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=485566&d=1294652020download ဆွဲ super one click exe ကို run,phone မှာ usb debugging mode လုပ်ထား, phone နဲ့ pc နဲ့ join, pc option box တက်လာရင် close နဲ့ ပိတ်လိုက်, ပြီးရင် super one click က root ကိုနှိပ်လိုက် .bat files တွေ run လိမ့်မယ်။ wait device မှာရပ်နေရင် bat file run နေတာကို ပိတ်လိုက်os version 2.1 or larter လားမေးလိမ့်မယ်။ yes နှိပ်။ အားလုံးပြီးရင် reboot လုပ် application တွေထဲမှာ super user တွေ့ရင် root လုပ်ပြီးသွားပြီ။ á€žá€€á€¹á€á€¶á€±á€œá€¸ January 2012 Registered Users wait device မှာရပ်နေတယ် bat file run နေတာကို ဘယ်လိုပိတ်လိုက်ရမလဲ á€žá€€á€¹á€á€¶á€±á€œá€¸ January 2012 Registered Users plz.. help me mandalay January 2012 Registered Users How can i root Huawei Sonic C8660 B858 version 2.3.5 ???????Somebody know that ??And how to do that?? kyikhainghtoon February 2012 edited February 2012 Registered Users How to upgrade Huawei c8500? kyikhainghtoon February 2012 Registered Users how to use superuser? kyikhainghtoon February 2012 Registered Users How to upgreat Huawei c8500? kyikhainghtoon February 2012 Registered Users Huawei c8500 ကို version ၿမင္.ခ်င္လိာ.ပါ nyein_chan_zaw April 2012 Registered Users root လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ကျွန်တော်သိသလောက် share လုပ်ခြင်းပါ. root ဆိုတဲ့စကားလုံးက linux ဘက်ကဆင်းသက်လာခြင်းပါ. root user ကိုဆိုလိုတာပါ. super user ဆိုရင်လည်းမမှားဘူး. မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် windows ဘက်က Administrator account လိုမျိုးပါ. linux မှာ အဲ့ super user (or) root user account ဟာ ဆရာကြီးပဲ. သူက Operating System ရဲ့ ဘယ်အပိုင်းတွေကိုမဆို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်ဗျ. ဟုတ်ပြီဗျာ android မှာ root လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း root user အနေနဲ့အသုံးပြုခွင့်ရအောင်လုပ်တာပါ. ဘာလို့ root user အနေနဲ့သုံးဖို့လိုတာလည်း. ဟုတ်ပြီဗျာ. ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းမှာ မြန်မာfont ထည့်မယ်ဆိုပါတော့. root explorer လို software သုံးပြီး original font (/system/font အောက်မှာရှိနေတဲ့ DroidSansFallback.ttf) ကို DriodSansFallback.ttf နဲ့ replace လုပ်လိုက်ပြီး permission တွေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် Zawgyi ကိုဖုန်းမှာသုံးလို့ရပြီ. but root explorer က root မလုပ်ရသေးတဲ့ phone တွေမှာ ထည့်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေရှိလဲဖွင့်ကြည့်လို့တော့ရမယ်. but ပြင်ခွင့်ပြောင်းခွင့်တွေတော့မရှိဘူးဗျ. You do not have permission to change တို့ဘာတို့ ပြလိမ့်မယ်. root explorer ကို root access ပေးမှ ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရလိမ့်မယ်ဗျ. အဲလိုတစ်ချို့ application တွေဟာ super user access ရမှ အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် root လုပ်ရခြင်းလို့ပြောရင်ရပါတယ်. aww root exploer နဲ့ root ဆိုတာ linux file system ရဲ့ (root သင်ကေတအားဖြင့် "/" windows ဘက်က c:\_ လိုမျိုးပေါ့ဗျာ) ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး. root user က root ကတော့ superuser or root user ကိုပြောတာပါ. kzthein April 2012 Registered Users My Huawei is U 8800+ can i root it? Thank puhshain June 2012 Registered Users U ကိုလုပ်လုပ် C ကို root လုပ်လုပ်ပေါ့နော်။ version 2.3.3/ 2.3.2 စတာတွေကိုကြည့်တာမဟုတ်ပါ။ Kernel Version & Bulid number ကိုသာကြည့်ကျသည်မို့ရမရနဲ့တောင်းသင့်မတောင်းသင့်ကို အိုင်တို့တွေက ကြည့်တာမို့ ဘော်ဘော်များအတွက် version ကိုပဲကြည့်ပြီး root လုပ်တာကို သည်းခံပေးပါလို့အကြံပေးချင်လို့ပါ..... Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla